चौतर्फी रुपमा भईरहेको बलि प्रथाको बिरोधलाई के भन्नुहुन्छ ? » Enavanari
चौतर्फी रुपमा भईरहेको बलि प्रथाको बिरोधलाई के भन्नुहुन्छ ?
पुनम लामिछाने, ब्युटिसियन
बलि प्रथा हुनु हुदैँन । वास्तवमा बलि प्रथाको बिरुद्धमा आवाज उठाएको मेरो तर्फबाट हेर्दा ठिक लाग्छ । भगवान खुसी पार्नको लागि बलि नै दिनुपर्छ भन्ने हुदैंन । बलि दिएर मन शान्त तथा आफ्नो उन्नति प्रगती हुन्छ भन्ने सोच्नु चाहिँँ भ्रम मात्र हो । यसलाई एउटा परम्पराको रुपमा लिने हो भने अहिलेको समयमा आएर सबै राम्रा नराम्रा परम्परालाई अंगाल्नु नै पर्छ भन्ने छैन । कुनै पनि कु–संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि कुनै अवोध पशुले आफ्नो ज्यानको आहुती दिनु पर्छ भन्ने लाग्दैन । विशेषगरी हामी नेपालीहरु भगवानको लागि बलि दिने भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो स्वादको लागि बलि दिन्छौ तथा हामी आँफू रमाउछौँ । संसारको सबै भन्दा चेतनशील प्राणी मध्ये मानिस पनि हो भनिन्छ तर यस्तो बलि दिने गर्दा चेतनाको स्तरमा कमी आएको होकी जस्तो देखिन्छ ।
मुकुन्द दाहाल, पत्रकार
बलि प्रथाको सुरुवात कहिलेदेखि भयो यस्मा आ–आफ्नै मान्यता छ । तर भाकल पूरा गर्ने नाममा या देवी देवतालाई खुसी पार्ने नाममा बलि दिने प्रथा निरन्तर छ । हुनत यो विश्वास संग जोडिएको पक्ष पनि हो । विश्वास र आस्था भन्दा ठूलो अर्को शक्ति हुन्न पनि । कसैको विश्वास माथि आघात पु¥याउनु अधर्म हो भन्ने मान्यता रहेपनि बलि प्रथाको समर्थन गरिरहन सकिदैन । बास्तवमा बलिमा पनि पञ्च बलिको मान्यता प्रबल छ । तर पञ्चबलिलाई मानिसहरुले आँफूमा रहेको काम, क्रोध,लोभ, मोह र अहंकारको त्याग पनि मान्ने गरेका छन् । र, यो मान्यता पनि प्रबल बन्दै आएको छ । बलि प्रथा हुनु हुदैँन भन्ने धारणा मेरो पनि हो । बलिको विषयमा विभिन्न धार्मिक मानिस तथा धर्मको आफ्नो आफ्नो धारणाहरु छन् । कसैको विचारमा चाडपर्वमा दिने बलि धर्म संगत लिने पनि गरिन्छ । वास्तवमा यो ठीक होइन तर पनि यस्लाई अझै पनि विश्वासले अल्झाउन सकेको छ । बलि संग हाम्रा विभिन्न पुरातात्विक महत्वहरु पनि रहेका छन्, जसले बलि प्रथालाई जीवन्त पार्न सफल बनायो । तर यो बलि प्रथा आवश्यक होइन कसैको फिलिङ्स् संग जोडेर यो गर्न जरुरी छ भन्ने धारणा मानिसहरुले व्यक्त गरेका मात्र हुन् ।
रन्जना श्रेष्ठ, डिजाइनर
जुनसुकै प्राणीले पनि जन्म लिए पछि बाँच्न पाउनु उसको अधिकार हो । खासमा यो बलि प्रथा राम्रो होइन । कसैको मृत्युले कसैलाई शान्ति तत्कालीन अवस्थामा दिएतापनि त्यसको असर दीर्घकालीन समय सम्म रहिरहन भने सक्दैन, त्यसमाथि अवोध प्राणीको हत्याबाट कुनै उत्सव मनाउन सकिदैन नै, त्यसैले म बलि प्रथाको विरोधमा छु । पशु बलिका पक्षधर पशुको मुक्तिका लागि विधिपूर्वक बलि दिनु शास्त्रीय हो भन्ने बताए पनि मानिसहरुले आफ्नो जिब्रोको स्वादको लागि देवताको नाममा बलि दिएको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । दुर्जनको विनाश र सज्जनको रक्षाका लागि भनेर दिइने यो बलिले कसैको रक्षा र कसैको विनास गर्नु भन्दा पनि मात्र पशुको विनास हुने देखिन्छ । त्यसैले पनि यो बलि प्रथा सही हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अरुण पौडेल, व्यवसायी
यो सामाजिक कुरीति हो । बलिको विषयमा विभिन्न धार्मिक मानिस तथा धर्मको आफ्नो आफ्नो धारणाहरु छन् । कसैले धर्मसँग जोडेर सहि हो भन्ने व्याख्या पनि गर्छन् भने कसैले गलत हो भन्ने । पशु अविवेकशील प्राणी हो, उसले मुक्तिको चाहना गरेको हुन्छ र उसलाई मुक्ति दिनको लागि भनेर उसको ज्यानको आहुति दिनु राम्रो होइन् । अविवेकशील प्राणीलाई मुक्ति दिन मठ मन्दिरमा विधिपूर्वक बलि दिनुपर्छ, मुक्त हुनका लागि बलि हुन पाउनु पशुको अहोभाग्य हो भन्ने मान्यता राखेर कुनै पनि अवोध प्राणीलाई धर्म वा संस्कारको नाममा बलि दिनु आफैमा लजास्पद जस्तो लाग्छ । आजको २१ औँ शताब्दीमा आएर बलिको कुरामा अल्झिनु र अझै पनि बलि हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नु पनि हुदैँन । बलिले समाजमा अशान्ती भित्राउनुको साथ साथै परम्परा तथा देवी देवताको नाम समेत बदनामी हुने हुन्छ । त्यसैले यो धर्मको नाममा बलि दिनुको म कट्टर विरोधी नै हुँ ।
बिल्कुलै गलत प्रथा हो,न कुनै ईश्वर वा देवीले न कुनै धर्मग्रन्थले कहिल्यै रगत वा बलि मागेको कुरा उल्लेख छ न यस्को कुनै तर्क र औचित्य नै छ । हर जीवको आत्मामा इश्वर हुन्छ भन्ने अनि इश्वरको नाममा निर्दोष पशुको भोग चढाएर आस्थाको मन्दिर रातो रगतले रक्ताम्य पार्नु भनेको जिब्रोको भोक शान्त पार्ने कालो बहाना र बिकृत मानसिकता बाहेक अरु केही थिएन र होइन पनि । यदि हर जीवात्मामा ईश्वर हुन्छ भने मन्दिरको ईश्वरले कसरी अर्कोे ईश्वरको भोग माग्छ ? देवीकै नाममा बलि भैरहेको सन्दर्भ हेर्ने हो भने पहिला राक्षसहरुको वा गलत प्रबृत्ती र ब्यवहार गर्नेलाइ देवीले गरेको संहारको प्रभावको केही अवशेष होला तर ती राक्षसी प्रबृत्ति दोषी थिए तर पशु निर्दोश हुन्छन् त्यसैले यस्को पनि औचित्यपुर्ण सम्बन्ध छैन । मेरो बिचारमा त्यही महाकालीले राक्षसको बध गरेर देवी खुशी भाको देखेर उनैलाइ खुशी पार्ने भ्रमपुर्ण प्रयासस्वरुप बिकास भएको प्रथा नै बलिप्रथा हो जुन मानव समुदायकै अज्ञानता र मुर्खतापुर्ण व्यवहारको रुपमा रहेको क्रुर सामाजिक र धार्मिक कलंक हो र यो प्रचलन सर्वत्र सदैब विरोधाभासपुर्ण छ ।
दुर्गा नाथ दाहाल, अभियान्ता
आफ्नो स्वार्थको लागी कुनै पनि अबोध पशुलाई बलि दिनु निंदनिय कार्य हो । हाम्रो देश बुद्धको देश, पशुहरुको पनि पति पशुपति नाथको देश, सिता भृकुटीको देश यो देशमा मन्दिर जस्तो ठाउँमा धर्म संस्कृतिको नाउँमा बलि दिनु कदापि राम्रो हैन । पहिले अबुझको कारण बलि दिएका थियौ । यो समाजको कंलक हो यस्ले गर्दा समाजमा हिंसा बढेको छ । बाठो छोराले लाटो छोरालाई आमाको अगाडि लगेर बलि दिदा कुन आमा खुसि हुन्छिन् होला । देवी भनेकी आमा हुन आमाले आफ्नो छोरा छोरिको भोग खादिनन् । मानिसले ढुगेंयुगमा पशुपंछि मारेर काटेर यातना दिएर रमाईलो गर्ने प्रचलन रहेछ यो ढुंगेयुगको प्रचलन २१ औ सताब्दिमा लागु गर्नु कुनै हालतले राम्रो हैन । हिंसा त्याग गर्नु नै हिन्दु हो । गीतामा पनि भनिएको छ अहिंसा परोधर्म कुनै प्राणीलाई दुःख कस्ट नदिनु नै ठुलो धर्म हो भनिएको छ । मानिस शिक्षित हुँदै जाँदा बलिप्रथा धेरै घटेको छ तर अझ पनि मानिसलाई चेतना नभएर बलि प्रथा सकिएको भने छैन । कुनै दिन सति प्रथा अन्त्य भए जस्तै बलि प्रथा हट्नेछ, यो समाजको ठुलो कलंक पनि हो ।
– कृष्णा चौलागाईं